InstaSweet Retro ကင်မရာ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » InstaSweet Retro ကင်မရာ
InstaSweet Retro ကင်မရာ APK ကို
မှန်ဘီလူးနေမီးတောက်, ဘောဇဉ်များနှင့်ဖုန်မှုန့်-ညိုဓါတ်ပုံဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆှဖှေဲ့ - အစဉ်အဆက်မတိုင်မီထက်ထွန်းလင်းကင်မရာများအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာဤကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အတော်များများက app ကို developer များ retro camera ကိုရေး Simulator ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
အချို့တကယ် retro cam ခံစားအပေါ် ယူ. သာသင် app ကိုဖွင့်ကြိုတင် filter များနှင့်ကျပန်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အလင်းယိုစိမ့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့နေချိန်မှာအတော်များများက app များကိုရိုးရိုး, သင်ပြီးသားရှိသည်ဓါတ်ပုံ filter များသက်ဆိုင်ပါသည်။ တချို့က apps များမှာလည်းယခုခဏ Store မှာ Play သာဤအကြောင်းကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက် retro cam app ကိုလမ်းကြောင်းသစ်၏ resurfacing နေကြသည်ကို Google အတွက်ပါပြီ။ ပြီးနောက် InstaSweet Retro ကင်မရာ app ကိုပြုလုပ်စုံလင်သော retro ဓာတ်ပုံကိုကြည့်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ filter ကို၏ပြင်းထန်မှု Customize
editing tools: Bold filter ကို, Brightness ကို, Contrast, အရိပ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ, အရိပ်နှင့် Image ကိုအပူချိန်
စပျစ်သီးကိုဓါတ်ပုံအေးမြဖြစ်ကြသည်။ retro ဓာတ်ပုံများကို chic ဖြစ်ကြသည်။ ဒီကြစို့ InstaSweet Retro ကင်မရာ အေးမြဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပလီကေးရှင်းကိုသင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံအပေါ်မှော်လုပ်ပါ။ , သင့်အကြိုက်ဆုံးကင်မရာ filter များ Find ပြခန်းမှသင်၏လှပသောပုံအချို့ကိုရှေးခယျြသို့မဟုတ်ယခုအသစ်တခု selfie ယူ. သူတို့ကိုတည်းဖြတ်ပျော်စရာရှိသည်။ သငျသညျကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောစပျစ်သီးကိုဓါတ်ပုံရရှိပါသည်ပြီးတာနဲ့, လူမှုကွန်ယက်ပေါ်သူတို့ကိုမျှဝေအကြိုက်ရေတွက်! သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအားလုံးဥစ္စာသူတို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုခစျြလိမျ့မညျ။ ဒီအေးမြဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအကောင်းဆုံး selfie ကင်မရာကြောင်းကိုစိတ်တွင်ထားရှိခြင်း, သင်ကင်မရာ filter များအပေါငျးတို့သကိုးကွယ်ရန်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါ!
နှင့် InstaSweet Retro ကင်မရာ သင်အလွယ်တကူထားသော filters set နှငျ့သငျပုံကိုယူမီသင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တူကြည့်ရှုမည်အရာကိုတစ်ဦး preview ကိုရနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ပြီးသားယူကြပြီဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုသက်ရောက်မှုအဖြစ်သူတို့အားကင်မရာ filter များကိုသုံးနိုင်သည်။ ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါတဲ့ retro လက်ရာသို့လှည့်ကနေသင့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံခွဲခြား။ selfie အချိန်ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖူးသောကွောငျ့, ဒီ app ကိုသုံးပြီး၏ရိုးရှင်းပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
သင်၏ဓါတ်ပုံများအေးမြစပျစ်သီးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတစ် retro ကြည့်ပေးစေခြင်းငှါ filter ကိုစပျစ်သီးကိုအသုံးပြုခြင်း။ သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံအေးမြစပျစ်သီးကိုသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ် retro ကြည့်ပေးဖို့လိုပါသလား? "Filter ကို" သင်အေးမြပျစ်သီးပုံရိပ်တွေသို့ filter ကို retro နှင့်အတူအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ပျော်စရာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် filter ကိုကင်မရာ App ဖြစ်ပါတယ်။
စပျစ်သီးကို retro camera ကို effect နှင့် filter နွေဦးနဲ့နွေရာသီဓာတ်ပုံများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုများမှာ! အဟောင်းကင်မရာသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ယူနှင့်အတူ 1967 ထံမှလက်ငင်းစပျစ်သီးကိုကင်မရာကသင်၏ဓါတ်ပုံများယခင်ကထက်အေးကိုကြည့်စေမည်။ ဤသည်စပျစ်သီးကိုကင်မရာ app ကိုပြီးပြည့်စုံစပျစ်သီးကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အေးမြပျစ်သီး photo filters များနှင့် retro camera ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြောင့် Android ကို™များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် retro camera ကို apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခု Download နှင့်သင့်ဓါတ်ပုံကြောက်မက်ဘွယ်ကိုကြည့်ပါစေ!